Faahfaahin:- Dil ka dhex dhacay xarunta madaxtooyadda Jubbaland – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faahfaahin:- Dil ka dhex dhacay xarunta madaxtooyadda Jubbaland
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose ayaa sheegaya in habeenkii xalay halkaasi lagu dilay askari ka tirsan ciidanka illaalada xarunta madaxtooyadda maamulka Jubbaland.
Mid ka mid ah dadka ku sugan magaalada Kismaayo oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa u sheegay in dilka askarigaasi uu geystay askari kale oo isna ka tirsan illaalada xarunta madaxtooyadda Jubbaland.
Labadaasi askari ayaa la sheegayaa inuu soo kala dhex-galay muran kooban oo aan illaa iyo haatan la ogeyn waxa uu ku saabsanaa.
Dhinaca kale, askariga dilka geystay ayaa la sheegayaa uu isku dayay inuu baxsado, balse ciidamo kale oo goobta ka agdhawaa ayaa islamarkiiba gacanta ku dhigay, waxaana lagu xiray saldhig ciidan oo halkaasi ku yaalla.
Illaa iyo haatan ma jiro wax war ah oo kasoo baxay saraakiisha ciidanka illaalada xarunta madaxtooyadda Jubbaland, kaas oo ay uga hadlayaan dilkaas xalay ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose.